Amanyathelo ali-10 okudala uPhando oluSebenzayo lwe-Intanethi | Martech Zone
Amanyathelo ali-10 okudala uPhando oluSebenzayo lwe-Intanethi
NgoLwesibini, Septemba 27, 2011 NgoLwesine, Septemba 19, 2013
Izixhobo zophando ezikwi-Intanethi ezinje ngeZoomerang ziyamangalisa ngokuqokelela ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo ukuhlalutya idatha. Ukudityaniswa kakuhle kophando kwi-Intanethi kukubonelela ngolwazi olwenziwayo, olucacileyo lwezigqibo zakho zeshishini. Ukuchitha ixesha elifunekayo ngaphambili kunye nokwakha uphando olukhulu kwi-Intanethi kuya kukunceda ufezekise amazinga okuphendula aphezulu, idatha ekumgangatho ophezulu kwaye kuya kuba lula kakhulu kubaphenduli bakho ukuba bayigqibe.
Nanga amanyathelo ali-10 okukunceda yenza uphando olusebenzayo, nyusa izinga lokuphendula kuphando lwakho, yaye phucula umgangatho opheleleyo wedatha oyiqokelelayo.
Chaza ngokucacileyo injongo yesaveyi yakho -Uphando olulungileyo lujolise kwiinjongo eziqondwa ngokulula. Chitha ixesha ngaphambili uchonge iinjongo zakho. Ukucwangciswa kwangaphambili kunceda ekuqinisekiseni ukuba uphando lubuza imibuzo efanelekileyo ukuhlangabezana nenjongo kunye nokuvelisa idatha eluncedo.
Gcina uphando lube mfutshane kwaye lujolise - Mfutshane kwaye kugxilwe kunceda kumgangatho kunye nobungakanani beempendulo. Ngokuqhelekileyo kungcono ukujolisa kwinjongo enye kunokuzama ukwenza isaveyi eyintloko egubungela iinjongo ezininzi. Uphando lweZoomerang (kunye neGallop kunye nabanye) lubonakalisile ukuba uphononongo kufuneka luthathe imizuzu emi-5 okanye ngaphantsi ukuyigqiba. Imizuzu emi-6 ukuya kweli-10 yamkelekile kodwa sibona amaqondo abalulekileyo okushiya kwenzeka emva kwemizuzu eli-11.
Gcina imibuzo ilula -Qiniseka ukuba imibuzo yakho ifikelela kwinqanaba kwaye uphephe ukusebenzisa ijaggon, islangqa okanye izifinyezo.
Sebenzisa imibuzo evaliweyo xa kunokwenzeka -Imibuzo evaliweyo yophando inika abaphenduli ukhetho olukhethekileyo (umz. Ewe okanye Hayi), okwenza kube lula ukuhlalutya iziphumo. Imibuzo evaliweyo iphela inokuthatha u-ewe / hayi, ukhetho oluninzi okanye umlinganiso wokulinganisa.
Gcina imibuzo yokulinganisa amanqaku ngokuhambelana nophando Izikali zokulinganisa ziyindlela elungileyo yokulinganisa kunye nokuthelekisa iiseti zezinto eziguquguqukayo. Ukuba ukhetha ukusebenzisa izikali zokulinganisa (umz. Ukusuka ku-1 ukuya ku-5) zigcine zingaguquguquki kulo lonke olu vavanyo. Sebenzisa inani elifanayo lamanqaku kwisikali kwaye uqiniseke ngeentsingiselo zokuhlala phezulu kunye nokuhlala ungaguquguquki kulo lonke uphando. Sebenzisa inani elingaqhelekanga kwisikali sakho sokulinganisa ukwenza uhlalutyo lwedatha lula.
Uku-odola ngokusengqiqweni - Qinisekisa ukuba uphando lwakho luhamba ngokulandelelana. Qala ngentshayelelo emfutshane ekhuthaza abo bathatha uphando ukuba bagqibezele isaveyi (umzekelo: "Sincede siphucule inkonzo yethu kuwe. Nceda uphendule olu hlolisiso lulandelayo."). Okulandelayo, ngumbono olungileyo ukuqala kwimibuzo esekwe kububanzi kwaye emva koko uye kuleyo icuthekileyo kububanzi. Okokugqibela, qokelela idatha yobalo kwaye ubuze nayiphi na imibuzo ethe tye ekupheleni (ngaphandle kokuba usebenzisa olu lwazi ukukrola abathathi-nxaxheba).
Phambi kovavanyo uvavanyo lwakho - Qiniseka ukuba uvavanya uvavanyo lwakho kwangaphambili kunye namalungu ambalwa ekujoliswe kuwo kunye / okanye osebenza nabo ukufumana i-glitches kunye nokutolika imibuzo engalindelekanga.
Cinga ixesha lakho xa uthumela izimemo zesaveyi -Izibalo zamva nje zibonisa ezona zivulekileyo kwaye ucofe amaxabiso ezenzeka ngoMvulo, ngoLwesihlanu nangeCawa. Ukongeza, uphando lwethu lubonisa ukuba umgangatho weempendulo zesaveyi awufani ukusuka evekini kuye kwimpelaveki.
Thumela izikhumbuzo ze-imeyile yophando - Ngelixa kungalunganga kuzo zonke iimvavanyo, ukuthumela izikhumbuzo kwabo bangaphendulanga ngaphambili kunokunika amandla okonyusa kumanqanaba okuphendula.
Cinga ngokunikezela ngenkuthazo-Kuxhomekeke kuhlobo lophando kunye nabaphulaphuli besaveyi, ukubonelela ngenkuthazo kuhlala kusebenza ngokukuko ekuphuculeni amazinga okuphendula. Abantu bathanda umbono wokufumana into yexesha labo. Uphando lweZoomerang lubonakalisile ukuba inkuthazo ngokwesiqhelo nyusa amaxabiso okuphendula ngama-50% kwi-avareji.
Ukulungele ukuqalisa? Bhalisela i simahla i-akhawunti esisiseko yeZoomerang, sebenzisa la manyathelo angentla, yazisa isaveyi yakho kwaye ulungele ukuhlalutya iziphumo zakho ngexesha lokwenyani. Hlala ubukele izithuba ezizayo apho ndiza kungena kwiimpawu zophando eziphambili kunye neendlela ezintsha zokubandakanya uphando olwenziweyo kwi-intanethi kwisicwangciso sakho seshishini. Uphando olonwabileyo!
Ngaba ngoku usebenzisa uphando lwe-Intanethi kwishishini lakho? Ngaba uzifumene ziluncedo ezi ngcebiso? Nceda ujoyine incoko kwicandelo lamagqabaza apha ngezantsi.
Ukuba le emva koko
Ukucwangciswa komsitho kunye neNtengiso yeNtengiso
Nov 26, 2014 kwi-6: 22 AM
Enkosi ngala macebiso amnandi :)